Iindaba - Kutheni ukuveliswa koobhaka besiko kuye kwaba ne "MOQ"?
Kutheni imveliso ubhaka ubhaka ine "MOQ"?
Kutheni siko ubhaka lemveliso has "MOQ"?
Ndiyakholelwa ukuba wonke umntu uza kudibana nengxaki yobuninzi be-odolo xa ufuna abavelisi ukuba benze ngokwezifiso iibhegi zobhaka. Kutheni umzi-mveliso ngamnye unemfuneko ye-MOQ, kwaye yintoni ubungakanani obuncinci be-odolo obuncinci kwimizi-mveliso yokwenza ulwenziwo?
Ubuncinci be-odolo yobungakanani beebhegi ezenziwe ngokwesiko zihlala zimiselwe kwi-300 ~ 1000. Umkhulu umzi-mveliso, kokukhona ubuninzi be-odolo ubuncinci. Kukho izizathu ezithathu eziphambili.
1. Izixhobo. Xa umzi-mveliso uthenga izinto zokwenza imveliso, kukho ubuncinci ubuncinci boku-odola ubungakanani. Izinto eziphambili ziphantsi zinobuncinci be-odolo ubuncinci beeyadi ezingama-300 (zinokwenziwa malunga noobhaka abangama-400). Ukuba wenza iibhegi ezingama-200 kuphela, emva koko umenzi kufuneka ahlale uluhlu lwezinto ezikhoyo kwiingxowa ezingama-200 ezizayo;
2. Iindleko zokubumba isiko koobhaka kunye nophuhliso koobhaka, nokuba wenza oobhaka abali-100 okanye 10,000, udinga iseti epheleleyo yokubumba, ibhegi yesiqhelo, ukukhula kwesampulu kunye nokubumba kufuna i-US $ 100 ~ 500 yeendleko zokungunda. , ukwabelana ngeendleko ngakumbi;
3. Iindleko zemveliso yobunzima yoobhaka abenziwe ngokwezifiso: Iingxowa zizinto ezenziwa ngezandla. Ubuncinci ubuncinci, buyacotha isantya sabasebenzi bemveliso. Yazi nje inkqubo, iphelile. Iindleko zabasebenzi ziphezulu kakhulu.
Ke ngoko, i-MOQ inxulumene nendleko. Kwingxowa enye, ukuba wenza i-100, ixabiso elinye liya kuba malunga no-2 ~ 3 amaxesha aphezulu kune-1000.